Ithegi: ugc | Martech Zone
Zithini iiNofollow, iDofollow, UGC, okanye iZixhumanisi eziXhasiweyo? Kutheni le nto i-Backlinks Imicimbi yeeNdawo zokuKhangela?
NgoLwesine, Aprili 1, 2021 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 2, 2021 Douglas Karr
Yonke imihla ibhokisi yam engenayo igcwala ziinkampani ze-SEO zogaxekile abacela ukubeka amakhonkco kumxholo wam. Yimisinga yezicelo engapheliyo kwaye iyandicaphukisa. Nantsi ke indlela eyenzeka ngayo i-imeyile… Molo Martech Zone, Ndiqaphele ukuba ubhale eli nqaku limangalisayo kwi [igama eliphambili]. Sibhale inqaku elineenkcukacha malunga noku. Ndicinga ukuba iya kwenza ukongeza okuhle kwinqaku lakho. Nceda undazise ukuba unguye
Kutheni uMxholo oQulunqwe nguMsebenzisi ulawula oPhakamileyo kwiMinyaka yeendaba zeNtlalo
NgeCawa, ngoFebruwari 5, 2017 NgeCawa, ngoFebruwari 5, 2017 UCorey Bloom
Kuyamangalisa ukubona indlela itekhnoloji eguquke ngayo kwixesha elifutshane. Kudala zahamba iintsuku zeNapster, iMySpace, kunye ne-AOL yokudayala ngokulawula intengiso ye-Intanethi. Namhlanje, amaqonga eendaba ezentlalo alawula ngokugqwesileyo kwindalo yedijithali. Ukusuka ku-Facebook ukuya ku-Instagram ukuya kwiPinterest, ezi ndlela zokuncokola ziye zaba yinto ebalulekileyo kubomi bethu bemihla ngemihla. Sukujonga ngaphaya kwexesha esilichitha kwimidiya yoluntu mihla le. NgokukaStastista,
I-ROBO: Benza njani uPhando lwabathengi namhlanje kwi-Intanethi kwaye bathenge ngaphandle kweintanethi
Lwesine, Matshi 24, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ngelixa siqhubeka nokwenza into enkulu ekukhuleni kwentengiso ye-Intanethi, kubalulekile ukukhumbula ukuba iipesenti ezingama-90 zokuthengwa kwabathengi zisenziwa kwintengiso. Oko akuthethi ukuba kwi-Intanethi ayinampembelelo inkulu- iyayenza. Abathengi basafuna ukwaneliseka kukujonga, ukuchukumisa kunye nokuvavanya ukuqhuba imveliso ngaphambi kokuyihlawulela. I-ROBO ayisiyonto intsha, kodwa iya isiba sisiqhelo kuhambo lokuthenga kunye ne
Uyisebenzisa njani iMixokelelwano yaBasebenzisi ngaphandle kokuTyholwa
NgoLwesine, Meyi 28, 2015 NgoLwesithathu, Meyi 27, 2015 UPetri Rahja
Imifanekiso eveliswe ngumsebenzisi ibe yimpahla exabisekileyo kubathengisi kunye neemveliso zeendaba, ukubonelela ngomxholo othile wokuzibandakanya kunye nexabiso elifanelekileyo kwimikhankaso- ngaphandle kokuba oko kukhokelela kwisimangalo esigidi seedola. Unyaka ngamnye, iimveliso ezininzi zikufunda ngendlela enzima. Ngo-2013, umfaki-zithombe wamangalela i-BuzzFeed nge-3.6 yezigidi zeedola emva kokufumanisa ukuba isiza sisebenzise enye yeefoto zeFlickr ngaphandle kwemvume. Imifanekiso kaGetty kunye neAgence France-Presse (AFP) nayo yafumana isigwebo semali esisigidi seerandi eziyi-1.2
Uyenza njani iNtengiso yeFutha kunye noMxholo weNtlalo
NgoMgqibelo, Novemba 15, 2014 NgoLwesihlanu, Novemba 14, 2014 Douglas Karr
Asizami ukuzenzela into yokuba singoyena mthombo wentengiso kunye netekhnoloji yokuthengisa kwi-Intanethi yonke. Sinobudlelwane obuhle nezinye iisayithi kwaye sikhuthaza uninzi loogxa bethu ababhale umxholo omangalisayo kule minyaka idlulileyo. Asijongi kuwo onke amasayithi njengokhuphiswano, endaweni yoko sibajonga njengezixhobo zabaphulaphuli bethu. Njengoko siqhubeka nokukhulisa ukufikelela kwethu, siyahlonitshwa njengesixhobo ngenxa yexabiso
NgeCawa, uJuni 15, 2014 Douglas Karr
Ukuba uyandilandela kwi-Twitter, besinencoko emnandi yokuxoxa nabantu kwiAtomic Reach bethetha ngomxholo oveliswe ngumsebenzisi (UGC). Nazi izinto eziphambili kunye nokususa okuphambili okuvela kwingxoxo ye-Twitter ye-AtomicChat, ebanjwa rhoqo ngoMvulo ebusuku nge-9 ngokuhlwa kwe-EST / nge-8pm CST / 6pm PST. Landela @Atomic_Reach kulo lonke uhlaziyo lwakho lokuthengisa umxholo! Mfutshane kumxholo owenziwe ngumsebenzisi, i-UGC ligama elisetyenziselwa ukuchaza naluphi na uhlobo lomxholo njengevidiyo, iibhlog, ifom yengxoxo